झूटा शिक्षकहरूले ख्रीष्टियानहरूलाई नै किन खोज्छन् ? – विश्वासको आवाज
म मेरो अनुभवबाट विषयवस्तु शुरु गर्न चाहन्छुः
ईश्वी संवत् २०००को फेब्रुअरीमा हामी काठमाडौँको मैजुबाहलमा डेरा लिएर बसेका थियौँ। दुई जना केटाहरू ख्रीष्टियानलाई नै खोज्दै आएका रहेछन्। तिनीहरूको कुन समझले काम गर्यो कुन्नि, हाम्रै घरबेटीसँग छेउछाउमा कतै ख्रीष्टियानहरू छन् कि भनेर सोधेछन्। तिनीहरू हाम्रै मान्छेहरू हुन् भन्ठानेर घरबेटीले पनि हामीतिर देखाइदिएछन्। पहिला कहिल्यै नदेखिएका ती जवानहरूको हातमा बाइबल थियो। तिनीहरूले आफूलाई साँचो ख्रीष्टियान भएको बताए। नाम र कहाँबाट आएका हुन् भनेर पूरा परिचय दिने औपचारिकता पनि पूरा नगरी सीधै सोधे, ‘‘तपाईँ ख्रीष्टियान हुनुहुन्छ ?’’ मैले जवाफमा ‘हुँ’ भनेँ। ख्रीष्टियानलाई खोजेको भनेपछि कसैलाई मेरो खाँचो परेछ क्यारे भन्ने हिसाबले अलिकति चासो दिएजस्तो गरेको थिएँ, तब भन्न थाले, ‘‘तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुभएको छैन! तपाईँ जाने चर्च झूटो हो! स्वर्ग जानु छ भने हामीकहाँ आउनुपर्छ!’’ छिमेकमा रहेको एउटा चर्चको नाम लियो र त्यस्तै खालका अरू चर्चमा जानेहरू सबै जना नरकमा पर्ने कुरो बताएपछि मेरो र उनीहरूको बीच चर्काचर्की नै पर्यो। दुई जनाले पालैपालो बोलेर मलाई उछिन्न खोजे। तिनीहरूसँग मेरो बोल्ने अधिकार नै नभएको जस्तो, मलाई झण्डै बोल्न नदिएको! तिनीहरूको कुरा काट्दा–काट्दै पनि तिनीहरूले बाइबलका केही पन्नाहरू पल्टाएर ४,५ वटा पदहरू मलाई देखाइभ्याए। त्यस्ताहरूसँग वाद–विवाद नगरूँ भनेर मैले तिनीहरूलाई जानको लागि अनुरोध गरेँ, तर मानेनन्। नमानेपछि मैले भनेँ, ‘‘तपाईँहरू यहाँबाट खुरुक्क जानुहुन्छ कि धकेलेर पठाइदिउँ?’’ जान त गए, तर बाइबलमा उल्लेख गरिएका केही सरापित वाक्यहरू बोलेर गए!
मलाई लामो समयसम्म लागिरह्यो, ‘‘तिनीहरू मकहाँ किन आए? सुसमाचार सुनाउने उद्देश्य नै हो भने किन विश्वास नगर्नेहरूकहाँ गएनन्?’’ तिनीहरूसँग मैले गरेका खरो व्यवहार र सम्वादलाई सम्झेँ। तिनीहरूले येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर मलाई सम्झाएनन्। उल्टै तिनीहरूले आफू मात्र राम्रो ख्रीष्टियान र बाइबललाई अक्षरशः मान्ने समूह भएको बताए र अरूचाहिँ नरक जानेहरू भनेर गिज्याए। तिनीहरूको बोलीमा परमेश्वरको प्रेम, येशूमाथि गरिने विश्वास, पश्चात्ताप, पापबाट मुक्तिजस्ता विषयहरू केही पनि थिएनन्।
तिनीहरूको उद्देश्य सुसमाचार सुनाउनु होइन, नत्र ख्रीष्टियान खोज्दै किन हिँड्थे त? झूटा शिक्षकहरूसँग तपाईंले पनि सामना गर्नुभएको छ भने तपाईंलाई पनि लागेको हुनुपर्छ, ‘‘यिनीहरू किन ख्रीष्टियानहरूकै घर–दैलो चाहर्दै हिँड्छन्? येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई किन खोज्दैनन्?’’ यस लेखमा झूटा शिक्षकहरूले किन ख्रीष्टियानहरूलाई मात्र खोज्छन् भन्ने विषयमा हामी छ वटा बुँदाहरूमा चर्चा गर्नेछौः
क) झूटा शिक्षकहरूसँग सुसमाचार नै हुँदैन । पापीलाई बचाउन येशू संसारमा आउनुभयो, जिउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो भन्ने सन्देश तिनीहरूको मुखबाट कहिले पनि सुन्न पाइँदैन।
ख) याहोवाका साक्षी, माता मान्ने झूटा समूहहरूको काम सुसमाचार सुनाउनु नै होइन, बरु जसरी भए पनि कमजोर ख्रीष्टियानहरूको हृदयमा अनावश्यक भय पैदा गरेर तिनीहरूको सङ्गठनमा हुल्नु हो।
ग) तिनीहरू ख्रीष्टियानहरूकहाँ नै धाउँछन् किनभने बाइबल, येशू, क्रूस्, चर्चजस्ता विषयहरू गैर–ख्रीष्टियानहरूले बुझ्दैनन्, जस्तैः येशूको कुरो लिएर एउटा गैर–ख्रीष्टियानकहाँ जाँदा उसलाई येशूको विषयमा मेलैसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ, तर यिनीहरूको काम बुझाउनु होइन न त बुझाउने नियत नै हुन्छ। तिनीहरूले हामीसँग जसरी कुरा गर्छन् त्यसरी नै गैर–ख्रीष्टियानहरूसँग गर्न सक्दैनन् किनभने तिनीहरूले बाइबल, येशू, क्रूस्, चर्च आदिको विषयमा केही बुझ्दैनन्। विश्वास नगर्नेहरूलाई यी विषयहरूमा मतलब पनि हुँदैन। गैर–ख्रीष्टियानहरूसँग ढङ्ग नपुर्याईकन कुरा गर्दा लखेटिन्छन् भन्ने कुरो पनि तिनीहरू राम्रोसँग जान्दछन्। झूटा शिक्षकहरूसँग सतावट खेप्ने साहस हुँदैन। कम्तीमा साँचो ख्रीष्टियानले तिनीहरूलाई सहन्छन् भन्ने तिनीहरू जान्दछन् र त्यसको फाइदा उठाउँछन्।
घ) तिनीहरू बलियो ख्रीष्टियानकहाँ कहिले पनि देखा पर्दैनन्। पास्टर र अगुवाहरूसँग कहिले पनि टक्कर लिन चाहँदैनन्। बरु तर्केर हिँड्छन्। कमजोर ख्रीष्टियानकहाँ यति धाउँछन् कि कसैले मध्यरातमा भेट्ने समय दिएछन् भने पनि तिनीहरू हाजिर हुन्छन्। तिनीहरूको कुरा सुने त ठीकै यति नम्र भएर कुरा गर्छन्, जब तिनीहरूको कुरो काट्न थाल्छन् तब सराप्न लाग्छन्। स्वर्ग र नरकको डर देखाएर कमजोर विश्वासीको त दिमाग र हृदय नै खलबल पारिदिन्छ।
ङ) तिनीहरू ख्रीष्टियानहरूकहाँ नै धाउँछन्, तर त्यस्तो ख्रीष्टियान जो नियमित बाइबल पढ्दैनन्, येशूको विषयमा चासो राख्दैनन् र मण्डलीमा आराधना गर्न नियमित जाँदैनन्। त्यस्ताहरूलाई थोरै समयमा नै लटरपटर गरेर आफ्नो झूटको ददलदलमा फँसाइहाल्छ।
च) तिनीहरू ख्रीष्टियानहरूकहाँ धाउनुको मूल कारण तपाईंको फाइदाको लागि नभएर तिनीहरूको आफ्नै फाइदाको लागि हो। विशेष गरी याहोवाका साक्षी नामक झूटाहरूसँग मुक्तिको निश्चयता हुँदैन । तिनीहरूले मुक्ति कमाउनुपर्छ । यसको लागि असल काम गर्न आफू बाध्य भएको सम्झन्छन् । असल काम नगरिएमा अनन्त जीवन गुम्न सक्ने डरमा जिइरहेका हुँदछन् ।/1/ तिनीहरूलाई लाग्दछ कि तपाईंलाई तिनीहरूको सङ्गठनभित्र लगेपछि याहोवा खुसी भएपछि अनन्त जीवन पाइने कुरामा विश्वास गर्दछन् । अर्को थरिका झूटा शिक्षकहरूले तिनीहरूको सङ्गठनमा जति धेरै मानिस तान्न सक्यो त्यति नै आर्थिक लाभ दिने हुँदा, तिनीहरू मरिमेटेर ख्रीष्टियानहरूलाई फँसाउने काममा लाग्दछन्। तसर्थ, उनीहरू आफ्नो कामै छाडेर ख्रीष्टियानहरूलाई बहकाउनको लागि धाउनुको मुख्य कारणहरूमध्ये उनीहरूको आफ्नै मुक्ति र आर्थिकको लाभको लागि हो।
झूटा ख्रीष्टियानहरूलाई पहिचान गर्ने तरिकाहरूमध्ये यही हो कि तिनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदैनन्। तपाईँकहाँ सुसमाचार लिएर आउँदैनन्। अनि तिनीहरूसँग सुसमाचार नै छैन।/2/ पापी मानिसप्रति परमेश्वरको प्रेम र उहाँको महान् योजना बारे तिनीहरू बताउन सक्दैनन् र बताउन जान्दैनन् पनि। तिनीहरू तपाईंको आत्मा बचाउनको लागि आउने नै होइनन्, बरु आफूलाई बचाउनको लागि हो। वास्तवमा यिनीहरूले येशूलाई विश्वास गरेकै हुँदैन र बाइबल पल्टाएर अरूलाई सुनाउँदै हिँडे पनि थेरै खण्डहरू मात्र फलाक्नको लागि कण्ठस्थ पारेका हुन् – त्यसको गुदी जान्दैनन्।
येशूले आफैले अन्तका दिनहरूमा चुनिएकाहरूसमेत झूटाहरूको फन्दामा पर्न सक्ने चेताउनी दिनुभएको छ। यिनीहरूसँग ख्रीष्टियानहरू झुक्किन्छन् किनभने तिनीहरूको हातमा उनीहरूले पढ्ने बाइबल हुन्छ र येशूको विषयमा फेद न टुप्पाको कुरा र्गदछन्। यो हाम्रो लागि नौलो कुरो होइन किनभने येशूले भन्नुभएको छ, ‘‘झूटा ख्रीष्टहरू, र झूटा अगमवक्ताहरू खड़ा हुनेछन्, र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठूला–ठूला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्’’ (मत्ती २४:२४)।
/1/ John Ankerberg & John Weldon, Fast Facts on Jehovah’s Witnesses (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 2003), 60.
/2/ R. Larry Moyer, Free and Clear: Understanding and Communicating God’s Offer of Eternal Life (Grand Rapids, Michigan: Kregel, 1997), 228.